Andininy Ángela de la Vieja momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ángela de la Vieja
Fantatsika rehetra fa miankina amin'ny lafin-javatra isan-karazany ny fahombiazana amin'ity vanim-potoana vaovao amin'ny varotra niomerika ity, ka tena ilaina ny fampiharana ireo fitaovana mety. Ny vidiny dia mitohy hatrany ho anton-javatra famonoana rehefa manapa-kevitra momba ny fividianana. Iray amin'ireo fanamby goavana atrehin'ireo orinasa eCommerce amin'izao fotoana izao ny fampifanarahana ny vidiny mba hifanaraka amin'izay tadiavin'ny mpanjifany amin'ny fotoana rehetra. Izany dia mahatonga ny fitaovana vidiana mavitrika ho an'ny fivarotana an-tserasera. Paikady momba ny vidiny mavitrika, ho fanampin'ny